မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: အခမဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သည်
Posted by mabaydar at 9:19 PM
ချောကလက်ကိတ်ကြိုက်ဝူး။ တခြားကိတ်ကြွေး... :P
ဒါဆို စတော်ဘယ်ရီလားဘာလား.. အဲဒိပုံထက်တင်လိုက်မယ်..
အပြင်မှာလည်း ဒီထဲကလို ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ ရက်မြတ်ဖြစ်ပါစေ မဗေဒါ။
လိုတိုင်းတ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။ :)
စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အတိုင်း တစ်ကယ်ဖြစ်ပါစေ။ :P :P
2/06/2009 11:31 PM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ လိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ။
အသက်ရာကျော် ပျော်ပျော်ကြီး နေနိုင်ပါစေ။
2/07/2009 12:52 AM
2/07/2009 2:17 AM
ဟေးးးးးးးးးး တစ်ချိန်တော့ ဗေဒါ လေးရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် မွေးနေ့ပွဲ လေး ဖြစ်မလာ ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ ..
အခုလောလောဆယ်တော့ ရာဟူး ကိတ်လေး စားပြီး ပြန်တော့မယ် ခဏပျင်းလို့ လေယာဉ်ပတ်မောင်း ရင်း ဝင်လာလိုက်တာ ခဏနေရင် အိုဘားမား နဲ့ ညစာစားပွဲ တက်ရအုံးမှာ မို့လို့ ပြန်ပြီဟေ့..
ရေလျှံ၊ ရုပ်ချော၊ ချစ်ခင်သူပေါပါစေ... သူငယ်ချင်း...:)
2/07/2009 12:46 PM
Hi Ma Bay dar,
All the thing pass smooth for u start from now.....
2/07/2009 7:38 PM
"HAPPY BIRTHDAY" ... Wish you wonderful life ahead.
2/07/2009 9:56 PM
ငါလာအော်တုန်းက ဒီပို့စ်မရှိပါဘူး :( မနှစ်က ဒီလိုနေ့ကို ငါမှတ်မိနေသေးတယ်ဟေ့ :)
2/09/2009 3:15 AM
မဗေဒါရေ... အရမ်းနောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ဟေးးးဟေးးးးးး
မှတ်မှတ်ရရ မနှစ်က နင့်မွေးနေ့ မွေးနေ့ပို့စ်မှာ ဒီBlogကို စရောက်ဖူးပြီး
ခပ်တည်တည်နဲ့ ၀င်စားပြီး ဆုတောင်းပေးရင်း ငါတို့ခင်ခဲ့တာလေးကို မြင်ယောင်မိတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ တနှစ်ရှိသွားပြီကိုးးးးးးး
ညီမရေ.. မလေးလဲ နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်တွေဖြစ်ပါစေ။ ခင်မင်ရတာလဲ ၀မ်းသာပါတယ်။